နည်းပညာ Archives - BuzzFeed Myanmar
တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ဖုန်းအမျိုးအစားအသစ်တွေ တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး ထွက်လာသလိုပဲ တစ်ပတ်ရစ် ဖုန်းဈေးကွက်ကလည်း တဖြည်းဖြည်း ကျယ်ပြန့်လျက်ရှိပါတယ်။ အသစ်စက်စက်ဖုန်းတစ်လုံး မဝယ်နိုင်လို့ တစ်ပတ်ရစ်ဖုန်းတစ်လုံး ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် အခုဖော်ပြမယ့် အချက်လေးတွေကို အဓိကစစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
လိင်မဆက်ဆံဖူးဘဲ ကိုယ်ဝန်ဆောင် ခဲ့တဲ့ အပျိုစင်မလေး
အသက် (၂၉)နှစ်အရွယ် လော်ရန်ဟာ ဘယ်သူနဲ့မှလိင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိပေမယ့် သူမ ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။သူမဟာ ဘယ်သူနဲ့မှ ဒိတ်မလုပ်ဖူးပေမယ့် သုက်ပိုးအလူရှင်ကိုရှာဖွေပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့ စိတ်ကူးခဲ့ပါတယ်။သူမမိသားစုနဲ့ ဆရာဝန်က တားမြစ်နေပေမယ့် မိမိဆန္ဒအတိုင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် သိပ်ကိုပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။
Notebook Battery ကြာရှည်ခံဖို့ ဆောင်ရန်-ရှောင်ရန်များ
Notebook / Laptop ဝယ်စဉ်ကပါလာတဲ့ battery တွေဟာ အရည်အသွေး ကောင်းပေမယ့် ဆောင်ရန်-ရှောင်ရန်လေးတွေ မသိထားတာ ကြောင့် သက်တမ်းပြည့် ( ၄-၆ နှစ်လောက်အထိ ) မသုံးရဘဲ အချိန်တိုအတွင်း battery cell တွေပျက်စီးပြီး နောက်ထပ်အသစ် လဲရတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အောက်ပါ ဆောင်ရန်-ရှောင်ရန် အချက်လေးတွေကို သိထားပြီး လိုက်နာကျင့် သုံးမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ notebook battery တွေကြာရှည်အသုံးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။
F8 2018 ညီလာခံ မှာ ကြေညာသွားတဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုငါးခု
အသက်ရှင်ဖို့ ကျောက်ကပ် လိုအပ်နေတဲ့ သားနှစ်ဦးထဲက တစ်ဦးကိုသာရွေးချယ်ခဲ့ရတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ရဲ့ ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်
ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်နှစ်ကို လက်ကိုင် မိုဘိုင်းဖုန်းဘယ်နှစ်လုံးလောက် လဲလှယ်အသုံးပြုဖူးပါလဲ? မိမိတို့ရဲ့ နေအိမ်မှာရော လက်ကိုင်မိုဘိုင်းဖုန်းအပါအဝင် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်း ဘယ်နှစ်မျိုးလောက်ရှိနေပါသလဲ? အသုံးမပြုတော့တဲ့ အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်တွေကို ဘယ်လိုဘယ်ပုံ စွန့်ပစ်လိုက်ပါသလဲ?
ဇူကာဘတ် ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာ
အမေရိကန်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်က တိုင်းပြုပြည်ပြု အမတ်တွေရဲ့ ရှေ့မှောက်မှာ ဖေ့စ်ဘုတ် ဦးဆောင်သူ မာ့ခ်ဇူကာဘတ်ရဲ့ စစ်ဆေးကြားနာမှုကတော့ ပြီးသွားပါပြီ။ အများမျှော်လင့်ထားသိလို ဖေ့စ်ဘုတ်ကြီး အကျပ်ရိုက်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပဲ မထင်မှတ်ထားတဲ့အပြောင်းအလဲတချို့ဖြစ်သွားပါတယ်။
ဖေ့စ်ဘုတ် ရဲ့ ရာသက်ပန်အကောင့်ပိတ်တာမခံချင်ရင် ဒါတွေလုပ်ထားပါ
Facebook ရဲ့ ရာသက်ပန် Disabledကျနော့် မယ် ၂၀၁၀ ခုနှစ်လောက်ထဲကသုံးတဲ့ အကောင့် ၂ ခု ရှိတယ်တစ်ခုကတော့ 2016 လောက်မှာဝင်လို့ ကြည့်လို့ပဲ ရပြီး ဘာမှ လုပ်ခွင့်မရတဲ့Lock ကျသွားခဲ့တယ် သက်တမ်းပြည့်မယ့်ရက်က